Maxuu ku qotumaa safarka uu MW Farmaajo saakay ugu amba-baxay Eritrea? – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka u ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea, iyadoo socdaalkan uu yahay kii afaraadoo Madaxweynuhu ku tago Eritrea, tan iyo markii uu bilowday xiriirka labada dal.
Socdaalka Madaxweyne Farmaajo ee Asmara ayaa la xiriira arrimo la xiriira gobolka Geeska Afrika, iskaashiga u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea, waxaana war kooban oo Madaxtooyada Soomaaliya ka soo saartay safarka Madaxweyne Farmaajo lagu sheegay in wada hadalo lagu xoojinayo xiriirka labada dal uu la yeelan doono dhiggiisa Eritrea Isaias Afwerki.
Safarka Madaxweyne Farmaajo ee Asmara ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dhaq dhaqaaqyo cusub ay ka bilowdeen gobolka Geeska Afrika, iyadoo todobaad ka hor uu Sacuudiga ku dhawaaqay inuu dhisay isbaheysi ay ku mideysan yihiin dalalka ku yaalla Gacanka Cadan iyo badda Cas oo ah illaa 8 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Inkasta oo dowladda Soomaaliya xulufo la tahay dowladda Qatar oo dhaqaalaha ugu badan ay ka hesho ayaa la ogeyn sida ay isugu wadi karto Isbaheysigan ay ka tirsan tahay ee Sacuudiga hoggaamiyo, sidoo kale Eritrea ayaa door weyn ka ciyaareysa inay isku soo dhoweyso Soomaaliya iyo dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo aan xiriirkooda wanaagsaneyn, siiba Imaaraadka.
Eritrea ayaa bishii November ee sanadkii hore ku eedeysay dowladda Qatar inay dalkeeda ka wado xasillooni daro iyo kacdoon ay dooneyso inay ku kiciso dhalinyarada, abuurista falal amni daro oo ay ka mid tahay sameynta kooxo shirqoollo iyo dilal ku fuliya Mas’uuliyiinta iyo Saraakiisha sare ee dowladda Eritrea.
Sidoo kale waxaa soo baxaya warar anaa heyn xaqiiqadooda oo sheegaya in Madaxweynuhu uu dalka Eritrea tababar ugu soo xirayo ciidamo ay Eritrea u tababareysay Soomaaliya, iyadoo maalmo ka hor ay soo bexeen warar sheegayey in dhalinyaro tababar loogu qaaday Eritrea ay dhinteen, mana jiro masuul ka tirsan dowladda uu arintaas beeniyey ama faah-faahin ka bixiyey, sidoo kale jirto meel ay dowladdu ku soo bandhigtay ciidamo ay tababar ugu direyso Eritrea.
Liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug oo la shaaciyey (Akhriso magacyada iyo beelaha)